Myanmar Love song (covered by J Yawsar + Nawsawu) အချစ်သီချင်း
ချစ်လေး ... ရင်ထဲတင်းကျပ်နေလို့ ခံစားရခက်နေလို့...ဒီစိတ်နဲ့ ရူးနေလို့...ရင်ထဲမှာ သိပ်ချစ်မိတာကိုး.....
ဒိုရေမီ - အဝေးကပဲချစ်နေမယ် ​(Doremi's away ka bay chit nay may covered by Eli) - Duration: 78 seconds.
1 year ago1,229 views ချင်းမိုင်မြို့ ဝေ့တင်ထောက်သို့သူငယ်ချင်းများနှင့် အလည်တစ်ခေါက်
လေးဖြူ - Diary (Lay Phyu's Diaryi covered by Na Tiqwa) - Duration:2minutes, 34 seconds.
1 year ago526 views သူငယ်ချင်းတစ်စု တွေ့တုန်းဆုံတုန်း လေးဖြူ ရဲ့ Diary ကာဗာလုပ်ဖြစ်လိုက်တယ်။
S7 KU FI= - Duration: 96 seconds.
1 year ago177 views 1:52
အဝေးကပဲချစ်နေမယ် - Duration: 112 seconds.
2 years ago423 views 2:25
ကိုယ်တော်ရှိနေတယ် - Duration:2minutes, 25 seconds.
2 years ago799 views ကြေကွဲစရာများ ကြုံတွေ့ နေလည်းကိုယ်တော်ရှိနေတယ်မျော်လင့်ချက်များယိုင်နှဲ့ နေလည်း ကိုယ်တော်ရှိနေတယ်
HOW GREAT THOU ART - Duration:4minutes, 48 seconds.
2 years ago57 views There's nothing we can compare to the love of God.There's nothing we can compare to the beauty of God's creation. HOW GREAT THOU ARTHOW GREAT THOU ART
SI JY /\_O LO. TY /\_O= - Duration:2seconds.
2 years ago211 views 3:36
a good lisu song - Duration:3minutes, 36 seconds.
2 years ago17,204 views 3:03
Men at Boneo Lisu Christian Church - Duration:3minutes,3seconds.
2 years ago206 views 1:57
သင်ခန်းစာ (၀ိုင်ဝိုင်း) - Duration: 117 seconds.
2 years ago5,033 views 2:49
lisu gospel song (cover) - Duration:2minutes, 49 seconds.
2 years ago424 views 1:19
Myanmar Gospel song - Duration: 79 seconds.
2 years ago182 views View all
1 year ago4,504,314 views Jesus Christ is God manifested in the flesh - Jesus says “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am", (John 13:13). "Anyone who has seen me has seen the Father [God]” ...
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် စစ်တုရင်ချန်ပီယံ သမီးငယ်လေး ၀င့်းလဲ့လဲ့ဝါ - Duration: 10 minutes.
1 year ago118,957 views ၆.၅.၂၀၁၅ ရက်နေ့က ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံတကာကျောင်းသား စစ်တုရင်ပြိုင်ပွဲတွင် အိန္ဒိယလက်ရွေးစင် ၊ ရုရှားလက်ရွေးစင် ၊ ဥရောပလက်ရွေးစင်တို့အား ကျော်ဖြတ်အနိုင်ယူခဲ့၍....ကမ္ဘာအဆင့် ၂၀ဖြင့် န...
Myanmar's Got Talent Episode 12 | Semi Finals - Duration: 1 hour, 19 minutes.
1 year ago188,494 views This video features some of the most talented acts - singers, dancers and magicians who has made it this far in the competition! Watch more from Myanmar's Got Talent 2015: http://bit.ly/MORE_Myanma...
YE-SU NY RO BEW GEU A KHEU. JI_ M CHO: PHAE, NGA LO [( M PHA NO.-S-WU )] 2015-01-24 - Duration: 20 minutes.
Lisu Gospel Media
2 years ago444 views Lisu Gospel Media© ●► YE-SU NY RO BEW GEU A KHEU. JI_ M CHO: PHAE, NGA LO ●► M. PHA NO.-S-WU ●► Uploaded by Ahpi Fish ●► 2015-01-24
XUH: WU [(M. PHA NO.-S-WU)] 2015-10-31 - Duration: 24 minutes.
1 year ago118 views Lisu Gospel Media© ][ XUH: WU ][ M. PHA NO.-S-WU ][ 2015-10-31
Myo Gyi - မင်းအချစ်တစ်ခုသာ - Duration:4minutes, 28 seconds.
1 year ago499,723 views မျိုးကြီး - ပြောင်းလဲခြင်းများ
နောက်ဆုံးအချစ် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း ( MTV ) - Duration:3minutes, 47 seconds.
2 years ago483,226 views နောက်ဆုံးအချစ် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်းအတိတ်ကအရိပ်တစ်ခုကြောင့်….တို့ နှစ်ယောက်ခရီးလမ်းတစ်လျောက် အဆင်ပြေပါ့မလား နင်ယုံကြည်ရဲမလား….ဘဝတစ်ခု အစပြုဖို့ ….အချစ်တို့ တံတားခင်းလို့ ….အတူတူလက်တွဲ ရင်ဆိုင...
ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားမိဘအချို့၏ စကားသံများ - Duration:5minutes, 21 seconds.
2 years ago32,371 views ဖမ်းဆီးခံ ကျောင်းသားမိဘအချို့၏ စကားသံများ
"အနာဂတ်ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်" - Duration: 1 hour, 16 minutes.
3 years ago196,304 views "အနာဂတ်တခုကို ပုံဖော်ကြခြင်း" စာပေဟောပြောပွဲ နှင့် စာပေစကားဝိုင်း ၂၆-၁-၂၀၁၄ စင်္ကာပူဦးကိုနီ"အနာဂတ်ပဉ္စမမြန်မာနိုင်ငံတော်"
IC 20th Anniversary LayPhyu - Duration: 22 minutes.
2 years ago38,437 views View all